XEERARKA KOR LOO QAADO EE KU YAAL BEERTA - BEERTA
Mararka qaar dareenkeena waxaa soo jiidanaya geedo leh caleemo cagaaran oo cagaaran iyo miraha dhalaalaya. Waxay u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh oo aan doonayo in aan isku dayo. Tani waa magac euol. Miyuu la mid yahay miraha la cuni karo eu magaciisa iyo meesha ay tahay in lagu magacaabo dhirta sunta ah ama daawooyinka? Euonymus wuxuu leeyahay in ka badan 200 nooc waxaana loo adeegsadaa naqshad beerta. Noocyada qaar ka mid ah dhirtaas waxay leeyihiin hurdi, kareem, caleemo cas ama midab-lacag caddaan ah oo ku taal bartamaha ama geesaha caleenta, sidaa daraadeed waxaa loo isticmaalaa sameynta dusha.
Beer habboon ee geedo Euonymus
Ka hor inta aan la beeri geedo eu magac-yar, waa lagama maarmaan in la baro qaababka noocyada xiisaha Noocyada ugu caansan ee eu magaciisa waxaa ka mid ah:
Warty euonymus waa geed ku dhow ilaa 2 mitir ama geed ilaa 6 mitir oo sarre leh oo leh caleenta cagaaran oo cagaar ah oo qulqulaya madow. Warshadu waxay leedahay ubaxyo hoos ah oo hoos u jilicsan, miraha casaanka leh ee leh prisyannikami casaan-bunni ah.
Eu magaciisu yahay yurub waa geedka yar, inta badan waa baadiyaha sii kordhaya. Midabka cagaarka madow ee caleenta xilliga dayrta ayaa noqda casaan. Miraha waa casaan leh prisemyannik orange. Waxaa jira in ka badan 20 nooc oo kala duwan oo noocyo kala duwan ah.
Koodhka loo yaqaan 'Eleonymus' waa geed cufan leh oo geedo leh oo leh geedo afar dhinac ah, ubax cagaaran, oo lagu soo ururiyey inflorescence. Miraha waa casaan cad. Noocyada ayaa leh in ka badan 20 nooc.
Codbixinta Forchun - Buulshada qulqulatadu waxay ka hadlaysaa bur-burka. Noocyo badan oo noocyada noocaan ah waxay ku kala duwan yihiin midabka caleen.
Japanese euonymus - waxaa loola jeedaa dhirta gudaha iyo beerta labadaba. Caleemaha waa weyn, cufan, cagaar mug leh leh khafiif ah. Warshadu ma awoodo inay u dulqaado heerkulka ka hooseeya 5 digrii, sidaas awgeed xilliga jiilaalka waa in lagu hayaa qol qabow.
Beerto Euonymus waxay u baahan tahay meel doorashada beerta. Waa inay noqoto mid baaxad leh sababtoo ah dhirtu si weyn ayey u kori kartaa. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu dhajiyo eu magaciisa hore xilliga guga ama dayrta. Si arrintan loo sameeyo, qodo daloolka waa in uu ahaado laba jibbaar oo ka mid ah xididdada geedka. Hooska ayaannu saarnaa dheecaan. Ujeedadaas awgeed, waxaan isticmaalnaa ciid, dhoobo dhoobo, leben jaban. On top of meesha dufan lakabka ah ee humus. Dhig wasakh ah, toosi nidaamka xididka iyo ku saydhaa carrada qoyan. Ka kor ku xusan waxaan fulineynaa isku-dhafka iyo waraabinta warshad.
Waa muhiim! Si aad u hayso qoyaanka ciidda, dusha sare waa mulched leh peat ama jilif geed. Tani waxay ka hortagi doontaa samaynta saliidda dusha sare iyo biqilka haramaha.
Xaaladaha sii kordhay ee eu magaciisa ku yaal beerta
Euonymus waxay dareemeysaa si ka wanaagsan iftiinka iftiinka. Caleemo cagaar ah ayaa caleemaha qorraxda u rogaa, iyo dhibco madow waxay ku sameeyaan kuwa badan oo midabo badan leh. In hooska, dhirta ku koraa aad u tartiib ah, iyo caleemo madaxtooyada lumin ay dhalaalaya. Heerkulka wanaagsan ee koritaanka Euonymus waa 18-22 digrii. Warshadu ma jecla biyaha joogta ah iyo carrada acidic.
Waa muhiim! Euonymus ma jecla ciidda dhoobada.
Kuwo badan ka hor intaan la beeri eu magacooda ma xitaa u maleynayaan inuu yahay sumad. Tani waa in la tixgeliyaa marka la qorsheynayo ubaxyada meel u dhow goobaha ciyaarta, sida eu magaciisu yahay mid dhirta sunta ah. Qiyaasta halista ah ee qaangaarka ah waa 35 jir. Tan iyo miro aad u soo jiidasho leh, waxay keeni kartaa xiisaha carruurta. Tani waa halis!
Gooyo Euonymus Crown
Euonymus waxaa loola jeedaa xoortay, sidaas darteed, waxay u baahan tahay manjooyin joogto ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyaa geedka guga iyo xagaaga. Guga, nadiifinta nadaafadda waxaa la fuliyaa: laamaha qalalan iyo waxyeello ayaa la gooyaa oo taajkii geedka ayaa la sameeyay. Timo xagaaga waa qurxin. Waxay siinaysaa baadiyaha qaab joomatari ah oo joogto ah. Booska ayaa si fudud u dulqaadan kara cimilada qalalan, sidaas darteed uma baahna waraabin badan.
Waa muhiim! Casiirka geedka ayaa sidoo kale sun ah. Sidaa darteed, marka la gooyo, gacmahaaga gacmo gashado.
Qalabaynta dhirta 'Euonymus'
Qalitaanka beeraha dhalinyarada waxaa la sameeyaa laga billaabo horraanta Febraayo. Ha isku darin dhirta xubinta taranka leh manjooyin gaboobay. Daaqadaha qaangaarka ah ee da'doodu ka weyntahay 7 sano, waxa fiican in aan dib loo dhigin. Haddii ay jirto baahi loo qabo in la baadho baadiyaha meel cusub, ka dibna guga waxaa si taxadar leh loo qodaa oo loo wareejiyaa dhoobo dhuleed ilaa meel cusub. Waraabinta dhirta waa in ay noqotaa mid joogto ah ilaa caleenta dhoobo.
Dhibaatada jiilaalka ee dhirta qaangaarka ah ee dadka waaweyn waa mid sareeya. Dhirta dhalinyarada ilaa seddex sano jir waxaa lagu hayn karaa jiilaalka leh caleenta qalalan, dadka waawaynna kama baqanayaan heerkul hoose, sidaas darteed uma baahna hoy. Si looga hortago khalkhalka xididada jiilaalka oo aan baraf lahayn, goobada jirridda ee geedka waxaa lagu daboolay dhadday ama caleemo dhacday.
Tixgeli hababka soo saarida, beerashada iyo daryeelka eu magaciisa.
Haddii aad rabto in aad ku faafiso magaca codka adoo adeegsanaya abuurka, waa inaad ogaataa in ay lagama maarmaan tahay in la ururiyo ka dib marka la furo sanduuqyada. Seed waa in la beeray isla markiiba ka dib goosashada. Haddii aad dib u dhigto nidaamkan ilaa guga, markaa way adkaan doontaa in la sameeyo, sababtoo ah waxay u baahan yihiin in lagu qooyay muddo saddex maalmood ah waxayna abuuri doonaan xaalado ah biqilka oo ku jira dabiiciga xilliga dayrta iyo jiilaalka. Nidaamkan waxaa loo yaqaan 'stratification'. Xirfadleyda ma ahan mid adag, laakiin taageerayaasha ma ahan mid adag sida dhibaatada.
Ma taqaanaa? Maaddada orange-ka ee loo yaqaan 'euonymus prillaries' waxaa loo isticmaalaa dumarka Hindida ah si ay u sawirtaan maqaar saaran.
In dabeecadda, euonymus dacaayad by abuur leh caawimo shimbiraha. Waxay cunaan miraha geedka, miraha adagna ma dheefshiido, darbiyada waxay ku dhacaan dhulka oo jeermiska.
Nidaamkan dhalmada waxaa inta badan loo isticmaalaa noocyada cufan ee eu magaciisa. Tani ma aha mid adag, tan iyo nidaamka xidid ee geedka waa gacmeed. Waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo kala saaro qayb ka mid ah geedka leh caleemaha yar yar iyo rhizome. Ka hor inta beerto, caleemaha waxaa la gooyaa, tegaayo 1/3 qayb.
Habkani waxa loo adeegsadaa Juun - Julaay. Tani, geedka aan ka yareyn shan sano ayaa ku haboon. Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo guntooda leh dherer ah ugu yaraan 7 cm leh mid ka mid ah isdhexgalka ee caleemaha geedka hooyada. Si loo kobciyo dhismaha xididka, goynta jarida waxaa lagu daaweeyaa xidid. Gooyn waxaa lagu dhejiyaa gogol-yar-yar-yar ama hoos-u-duub, dhulka oo si wanaagsan loo bacrimiyey. 3-4 cm oo ciid ah ayaa lagu shubay dhulka, waxay ku hayn doonaan qoyaanka si fiican. Natiijada waxaa la helaa bil iyo badh.
Faafinta suckers xidid la fuliyey guga hore. Si aad tan u sameyso, kala sooc qaybta xididada leh buro boodh ah, iyo dhererka caleemaha waa in aan ka badnayn 50 cm Miisaanka qarniga farcankiisa waa inuu ahaadaa hal iyo badh centimitir, dhererkuna waa 30 cm.Waxaa lagu beeray meel joogto ah.
Cudurada suurtagalka ah iyo cayayaanka ee eu magaciisa, siyaabo loola dagaalamo
Euonymus waa mid aad u jecel cayayaanka. Waxay u egtahay baalmood furan, xawaare, aphids, caarada caarada, iyo cayayaan qoto dheer. Inta badan awooddaas waxaa loo isticmaalaa sidii cayayaanka ku jira cayayaanka geedka tufaaxa. Dhamaan cayayaanka waxaa lagu uruuriyaa eosklet, waxaana lagu burburiyaa macdanta kiimikada, laakiin dhirta miraha waxay ku jirtaa iyadoon daaweyn kiimiko ah. Ka feker sidaad u aqoonsan lahayd cudurrada xayawaanka iyo waxa macnaheedu yahay in wax laga qabto cayayaan kasta.
Gabbaadka on caleemaha saameeyaa afkoda geedka. Mugdi madow ama caddaan ah oo caddaan ah ilaa 2 mm dhexroor ayaa u muuqda iyaga. Shchitovki nuugaan casiir ka soo caleemaha geedka, iyo dusha huruud ah u muuqdaan at site of attachment, taas oo kor u kaca muddo dheer iyo hogaamiya marka hore dhimashada caleen, ka dibna geedka laftiisa. Xakamaynta cayayaanka ayaa lagu qaadi karaa sunta cayayaanka (tusaale ahaan, Aktara, Aktellik, Bankol, Karbofos, iwm.) Laakiin buufinta ma keeni doonto natiijo waxtar leh, maaddaama daboolku uu ka ilaaliyo cayayaannada kiimikada sunta ah. Waxaa lagama maarmaan ah in si farsamo ahaan loo socodsiiyo caleemaha warshad leh tampon ama burush.
Aboorka Apple wuxuu ku salaysan yahay afkoda qaabka hareeraha, oo lagu xirxiray dooxooyinka. Bartamaha buulka waxaa laga helaa taayirro, kuwaas oo burburiya caleemaha geedka waxayna keeni karaan dhaawac aan loo baahnayn. Dagaalka waxaa lagu qaadaa sunta cayayaanka. Buulaha caterpil waa la gooyaa oo la gubaa, geedka waxaa lagu daaweeyaa kiimikada.
Hawthorn waa balastar cad oo ballaaran leh oo xariijin madow ku yaal baalasheeda. Waxay, sida aboorka tufaaxa, ma waxyeelo. Laakiin xawaashka cawlan, 4-5 cm dheer, waxay ka muuqataa ukumaha ay ku dhacdo, waa cayayaanka ugu muhiimsan. Waxaa lagama maarmaan ah in lala dagaallamo iyaga oo kaashanaya cayayaanka, burburinta hoolka habka kulul. Rugta haweenku waxay cunaan tufaax oo keliya.
Aphid waxa loola jeedaa cayayaanka xun ee beerta. Cayayaankaani waa midab madow ama cagaaran midabyo leh kolonyada degganaayo caleemaha yar yar ee warshad ama ka soo hooseysa caleemaha. Aphid wuxuu nuugaa juuska geedka oo wuxuu sii daayaa walax macaan - dhibicda. Qudhooyadu waxay ku quudiyaan walxadan. Ha u maleynin in aalku cuno aphids. Taas bedelkeeda, waxay ku jiraan asxaab. Waxaad la dagaalami kartaa aphids siyaabo kala duwan: iyadoo la adeegsanaayo saabuun (2 koob oo biyo ah, 2 qaado oo saabuunta dareeraha ah), iyo caawinta ladybugs, laakiin habka ugu caamsan ee soo-gaadhista waa kiimikada - iyadoo lagu caawinayo sunta cayayaanka iyo sunta cayayaanka.
Joogitaanka caarada caarada cas waxaa laga go'aamin karaa warshad iyadoo la adeegsanayo sifooyinka soo socda: marka hore, dhibco iftiin ah ayaa ka muuqda caleemaha, kadibna waxaan fiirinaynaa curvature of dusha sare ee qaabka tubercles. Si loola dagaallamo calaamadda, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto caleemaha saameeya oo gubta, iyo in aad ka baaraandegtid eu magaciisa cayayaanka. Ka dib markii processing, dhirta u baahan tahay waraabin dheeraad ah, maadaama ay u baahan tahay si loo abuuro xaalado si dhakhso ah soo celinta caleenta.
Codsiga iyo sifooyinka faa'iidada leh ee eu magaciisa
Euonymus waa dhir daawo. Iyadoo ujeedada daaweynta adoo isticmaalaya jilif iyo xayawaan dhirta. Waxaa ku jira astaamaha dufan iyo dufan, alkaloids, carbohydrates, flavonoids, oo ku lug leh dheef-shiid kiimikaad.
Ma taqaanaa? Qalabka xididka ee Euonymus waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka beeraha. Gutta-percha waa shey la mid ah maqaarka oo la mid ah caagga dabiiciga ah, kaas oo horay loo isticmaalay warshadaha raadiyaha, warshadaha kabaha, dhakhtarka ilkaha, ee soo saarista kubbadaha golf.
Evonimine, kaas oo ku jira geedka, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad caadi u yeelato waxqabadka nidaamka wadnaha. Euormusku sidoo kale wuxuu leeyahay saameyn ku daweynaya xubnaha dheef-shiid kiimikaadka, wuxuu cadaadiyaa cadaadiska dhiigga, isaga oo madax xanuunaya, wuxuu kordhiyaa awoodda ragga, isaga oo ka soo horjeeda cudurrada fungal ee maqaarka iyo ciddiyaha iyo helminths. Maraq ka kooban boodhka eu magaciisa ayaa loo isticmaalaa sida calool jilciye.
Laakiin warshadani waxay leedahay khilaaf. Laguma qaadi karo dadka qaba cudurada ba'an iyo caabuqa mindhicirka yar. Tan iyo eu magaciisa ayaa iska leh dhirta sunta leh, gaar ahaan miraha, waa lagama maarmaan in loo isticmaalo daaweynta iyo ka hortagga cudurrada qiyaasta adag sida waafaqsan cuntooyinka qaarkood. Ka taxadar, sababtoo ah isticmaalka warshadani waxay keeni kartaa matag, daal, qalal.
Ma taqaanaa? Qalabka Fuzien waxaa laga sameeyaa eu magaciisa. Si arrintan loo sameeyo, waxaad ku gubtaa xaabo qoryo leh eu magaciisa, oo lagu dhejiyo tuubooyin bir ah. Fusenka si fudud ayaa loo tirtiraa, laakiin waxay bixisaa sifooyinka habka jilicsan ee madow, sidaas awgeed waxaa loo isticmaalaa sawirro.